I-china Marble yexabiso eliphantsi leNdalo eliCwangcisiweyo leNkqubo yokuTyholwa kwamatye mveliso kunye nabenzi | I-DFL
Ixabiso eliphantsi leMarble yeNkcubeko eliCwangcisiweyo
Umzekelo No .: DFL-JBPB
Isixhobo: I-marble ye-Beige
Umzekelo No .:I-DFL-JBPB
Isixhobo: Beige Marble
Ukupakisha:7pcs / ibhokisi, 48boxs / ikreyiti
Ixabiso leNkampani: Ukuhlwayela imbewu yeKarma elungileyo
Inobuncwane bokubumba kunye nombala obongeza imeko yokuphakama okungapheliyo kuyo nayiphi na indawo yangaphakathi okanye yangaphandle. Ukuqinisekisa ukomelela kunye nokusebenza ngokuchaseneyo, iimveliso zamatye endalo zinokusetyenziselwa ukwenza ukujonga okuhlangeneyo kwesitayile esihlala sikho. DFLstoneIiphaneli zamatye zihambelane nezi mpawu zilandelayo:
Iikhathalo zomkhiqizo: Ngaba ufuna uMvelisi kunye nomthengisi ofanelekileyo weNdalo? Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke iipaneli zeNdalo yeMarble yeMarike ziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi-China Origin Factory yeNkqubo yokuTyholwa kwamatye. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Sisebenzisa izixhobo zemveliso eziphambili kunye netekhnoloji, kunye nezixhobo zovavanyo ezifanelekileyo kunye neendlela zokuqinisekisa umgangatho wemveliso yethu. Ngetalente zethu ezikumgangatho ophezulu, ulawulo lwezenzululwazi, amaqela agqwesileyo, kunye nenkonzo yokujonga, iimveliso zethu zithandwa ngabathengi basekhaya nabangaphandle. Ngenkxaso yakho, siya kwakha ngomso olungcono!
Iithayile zikaMoses eziMnyama eziMnyama eziMnyama zoDonga lwangaphakathi
IPhaneli yeNdalo eDumileyo ye-3D yoDonga lwangaphakathi
I-Grean yeNdalo eliQokelelweyo leLedgerstone lihombise iiOuts ...